Yan Aung: ဖတ်မိသောစာ ရသောအတွေး (၂) - မျက်နှာသစ်ခြင်း...
စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့လူတိုင်းလိုလို ကိုယ်ဖတ်မှတ်ထားဖူးတဲ့ စာ၊ကဗျာ၊ဆုံးမစာလေးတွေဟာ အခါအခွင့်သင့်တဲ့အခါမှာ မိမိတို့ရဲ့ ခေါင်းထဲကို ရောက်လာတတ်ကြပါတယ်. အဲဒီ့အခါကျမှ...
“ဟာ..... ဒါပဲ..... ဒါကို ဆိုလိုတာပဲ... ” ဆိုပြီး လက်ဖျစ်တတွက်တွက်၊ ပါးစပ်ကတဖွဖွ ပြောဆိုရင်း လေးနက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုကို တစ်သက်စာ မွေးစားမိလိုက်တာမျိုး ကြုံကြိုက်မိကြမှာပါ...
တစ်ချို့လည်း ရလာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရင်းနှီးပြီး အမှားတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါမမှားအောင် သတိရှေ့ဆောင်ပြီး ရှောင်ကြဉ်ကြိုးစားနေထိုင်သွားကြရင်း အောင်မြင်မှုနဲ့ ပိုမိုနီးစပ်သွားတတ်ကြပါတယ်.
တစ်ချို့ကတော့ အမှားတစ်ခုကို ပြုပြင်မယူနိုင်ဘဲ ဒီအမှားကိုသာ ထပ်ခါတလဲလဲ ကျူးလွန်နေမိတတ်ရင်း ဥာဏ်ပညာရင့်ကျက်မှုအပိုင်းမှာ အကြီးအကျယ် ဆုံးရှုံးနစ်နာသွားကြရပါတယ်.
တစ်ချို့စာတွေဟာ ဖတ်လိုက်ပေမယ့် ရင်ထဲအသည်းထဲထိ ရောက်ဖို့ တစ်စုံတစ်ရာလိုအပ်နေတတ်ပါတယ်.
အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ရင့်ကျက်လာတဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနဲ့ အတွေ့အကြုံပါ..
Experience is the best teacher တဲ့...
ကျွန်တော်လည်း စာတစ်ချို့ကို အထိုက်အလျောက် ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်. တစ်ချို့စာတွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိပြီး ဖတ်မိစဉ် တခဏမှာ digest လုပ်ပစ်လိုက်နိုင်ပေမယ့် တစ်ချုိ့စာတွေကတော့ ကျွန်တော့်နှလုံးသားထောင့်တစ်နေရာမှာ မသိမသာ ကိန်းအောင်းနေတတ်ကြပါတယ်. အချိန်အခါတစ်ခုကို စောင့်နေသလိုပါပဲ...
အခုတော့ အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ ဆရာသမားကောင်းကြီး ကျေးဇူးနဲ့ အဲဒီ့ နှလုံးသားထောင့်တစ်နေရာက စာကောင်းပေမွန်တစ်ချို့ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲကို Digest လုပ်ဖို့ ထွက်ကျလာခဲ့တယ်.
အဲဒီ့ထဲက တစ်ခုကတော့ အခုကျွန်တော်ဝေမျှချင်တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့...
ဟိုသည်ပြောင်းနေ၊ ခုနစ်ထွေက တတ်
လူထဲပြန်ဝင် တိုးလိုက်မိ…။ ။
သောကခြေရာ ရတနာ ကဗျာများ…
အဲလို ခဏခဏ ဖြစ်မိတယ်...။ ကဗျာတွေ အရင်က သိပ်မဖတ်ဘူး ... နားမလည်လို့.. ဘလော့ရပ်ဝန်း ရောက်မှ ဖတ်ဖြစ်တယ်.. နားမလည်တာကို နားလည်အောင် လုပ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့။။ မဖတ်ဖူးတာတွေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ...။
Thx. for sharing, brother.